फुड प्वाइजनिंग | Bhalakushari
फुड पोइजिनिङ्ग भनेको पेट–आन्द्रा सम्बन्धी रोग हो । यो किटाणुद्वारा वा त्यसका विषाणुद्वारा वा रासायनिक बस्तुहरू वा प्राणी वा वनस्पतिको विषद्वारा दूषित भएका खानेपदार्थहरू खाएका कारणले हुने गर्दछ । कतिपय यस्ता रोगहरू विरामीलाई गाउँघरमा हरिताल पर्नु पनि भनिन्छ । फुड प्वाइजनिङ्ग व्यक्ति विशेषको समस्या नभई महामारी समस्या हो यो समस्या एका घर देखि पूरै टोल वा गाउँलाई देखा पर्दछ र प्रायःजसो समस्या (महामारी) को एकैखाले लक्षणहरू देखा पर्छन् जसमध्ये पेट दुख्ने, झाडापखाला र कुनै समयमा बान्ता मात्र हुने गरी पाचन प्रणालीमा गडबढी हुन्छ ।
फुड पोइजनिङ्गको प्रकार
फुड पोइजनिङ्ग हुने अनेकौं कारणहरू छन् ती कारणहरूलाई बुझ्नका लागि ३ प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ ।
१. किटाणु र जिवाणुबाट हुने फुड पोइजनिङ्ग
२. रसायन हुने फुडपोइजनिङ्ग
३. बनस्पतिबाट हुने फुडपोइजनिङ्ग
धेरैजसो फुडपोइजनिङ्ग व्याक्टेरिया र भाइरसबाट हुने गरेको पाइएको छ । मुख्यतयाः सालमोनला, स्टाफाइलोकोकल, बोटुलिजय, क्यामिलो व्याक्टरबाट हुने फुडपोइजनिङ्ग निकै हुने गरेको पाइएको छ । यसैगरी भाइरसमा हेपाटाइटिसले पनि फुडपोइजनिङ्ग गराउँछ ।
रासायनिक पदार्थहरू पनि फुडपोइजनिङ्ग कारण बन्न सक्छन् । रासायनिक मल र किटनाशक विषादीले पनि फुडपोइजनिङ्ग गराउने हुन्छ ।
यसपटक हामीले खासगरी क्टेरियाबाट हुने फुडपोइजनिङ्गको रोकथाम उपचारका बारेमा गरेका छौं । साथै खाद्य पदार्थ संचय गर्दा यी जीवाणुबाट दूषित हुन नदिन र भइहालेमा फुडपोइजनिङ्ग हुन नदिने तरिकाबारे चर्चा गरेका छौं ।
हामीले खाने गरेका खानाहरू कुनै बाह्य पदार्थद्वारा दूषित हुन गएमा विषालु वा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छन् । यस्ता खाले खानाहरूले पेटको पाचन प्रणालीमा गडबढी गर्ने, झाडापखाला चलाउने वा विभिन्न रोगहरू (टाइफाइड, हैजा, कमलपित्त आदि) लगाउने गर्छन् । गाउँघरमा खानाद्वारा स्वास्थ्यमा हानी वा मृत्यु गराउने घटनालाई हरिताल परेको भन्ने पनि गरिन्छ । हरिताल पर्नुलाई अंग्रेजीमा Food Piosning र नेपालीमा खाद्यजनीत स्वास्थ्य समस्या भन्न सकिन्छ ।
विश्वभर हरेक वर्ष झण्डै १ करोड व्यक्तिहरू हरितालमा परेर विरामी पर्ने र कैयनको ज्यान जाने गर्दछ । त्यसमध्ये सयकडा ५५ घटनाहरू खानालाई उचित ढंगले प्रयोग नगरेको कारण र संचयन (भण्डारण) नगरेकोले घट्ने गरेका छन् । सयकडा २४ घटनाहरू खाना चलाउनु वा खानु अघि राम्ररी हात नधोएको कारणले हुने गरेका छन् । अचम्म त के भने जम्मा सयकडा ३ वटा घटनाहरू मात्र खानाको स्रोतको कारणले हुने गरेका छन् । यसकारण यो घटनाहरू रोकथाम प्रयोगकर्ता र घरभित्र गर्न सकिने कामहरूले मात्र गर्न सकिन्छ ।
विश्वभर प्रत्येक वर्ष दसौंलाखका संख्यामा विषक्त खानाका घटनाहरू घटछन् । त्यसमध्ये करिब ५५ प्रतिशत फुड पोइजोनिङ्ग अनुपयुक्त तरिकाले खाना पकाउनु र संचित गर्नाले हुन्छ भने २४ प्रतिशत अपर्याप्त सरसफाईका कारणले हुन्छ । मात्र ३ प्रतिशत असुरक्षित खानाको स्रोत प्रयोग गर्नाले हुन्छ ।
करिब २० प्रकारका किटाणुहरूले खानालाई विषाक्त बनाउन सक्छन् । किटाणु भएको खाना खाएपछि यो जीवाणुहरू हाम्रो शरीरमा गई संख्यामा बृद्धी हुनुका साथै विष (Toxin) पनि छाड्छन् । जसको कारण वाक्वाक आउने, वान्ता हुने, पेट काट्ने, पातलो दिसा आउने र गम्भीर अवस्थामा दिसामा रगत आउने तथा ज्वरो आउने समेत हुन सक्छ । तर यस्तो लक्षणहरू शरीरमा विषाणुको (भाइरस, ख्ष्चगक) को संक्रमणका कारणले पनि हुने भएकोले खाना खाने वित्तिकै विरामी भएमा यसको कारण विषाक्त खाना मात्र नभै अरु पनि हुन सक्छ ।
यो रोग क्लोष्ट्रिडियम बोटुलिनम भन्ने किटाणुको विजाणु (Spore) ले बनाएको विषाक्त (Toxin) को कारणले हुन्छ । यो किटाणु सर्वत्र पाउने भए पनि बोटुलिनम विजाणुले (Spore) अक्सिजन नभएको अम्लिय वातावरणमा मात्र Toxin बनाउन सक्ने भएकोले विशेष अवस्थामा मात्र यसले फुड पोइजेनिङ्ग गर्न सक्छ । जस्तै : उपयुक्त रुपमा प्रशोधन नगरिएको कम अम्ल भएको क्यान (Can) प्याकेटमा भरिएको स्याउ, माछा इत्यादि खाएमा ।
बोटुलिजम कसरी नष्ट गर्न सकिन्छ ?
बोटुलिजमको जिवाणु निर्मूल गर्न कठिन हुन्छ किनकी यिनीहरू घन्टौंसम्म १००ºC को तापक्रममा पनि जिवित रहन सक्छन् । तर १२०ºC मा नष्ट गर्न सकिन्छ र साथै यसको त्यहष्ल गर्ने १००ºC मा १० मिनेट र ८०ºC ३० मिनेट तताउँदा नष्ट हुन्छ ।
बोटुलिजम हुनबाट कसरी बच्ने ?
कम अम्ल भएको खानामात्र प्रयोग गर्ने । व्यावसायिक रुपमा क्यानिङ्ग भएको वस्तुको सिल तोडिएको भएमा बट्टा कुच्चिएको अथवा फुलिएको भएमा, बट्टा खोल्दा विष्फोटन जस्तो भएमा, बास्ना अथवा रंग नराम्रो भएमा यस्ता वस्तुलाई फ्याकिदिने । शंका लागेको वस्तु तताउँदैमा बोटुलिज्मको क्उयचभ नष्ट नहुने भएकोले यस्तो वस्तुलाई फालिदिने ।
बोटुलिजमको लक्षण के के हुन्छ ?
विषाक्त खाना खाएको १२–३६ घण्टा पछि निम्न लक्षणहरू देख्न सकिन्छ ।
आँखा धमिलो हुनु, एउटालाई दुईवटा देखिनु, आँखाको नानी ठूलो हुनु, आँखाको ढक्कन भरी हुनु र आँखा खोल्न नसक्नु, मुख सुक्खा हुनु, घाँटी दुख्नु, हात गोडा कमजोर हुनु, निल्न गाह्रो हुनु, स्वर बदलिनु, स्वास फेर्न कठिन हुनु, अरु फुड प्वाइजेनिङ्गमा जस्तो बान्ता हुने, वाक्वाक लाग्ने पखाला लाग्ने जस्तो हुँदैन ।
यो रोगको उपचार के हो ?
श्वास प्रश्वासको मांसपेशी कमजोर हुन सक्ने भएकोले यो रोग प्राणघातक हुन सक्छ । साथै अन्य फुड पोइजेनिङ्गको जस्तो यस रोगमा वाकवाक लाग्ने, बान्ता हुने, पखाला लाग्ने नहुने कारणले विरामीलाई उपचार गर्न ढिलाइ गरिन्छ । त्यसैले यो रोग लागेको शंका लाग्ने वित्तिकै स्वास्थ्यकर्मीसँग तुरुन्त सम्पर्क गर्नुपर्छ ।
एक वर्ष मुनिका बालकहरूलाई महबाट सर्ने यो रोग मुख्यतः २ देखि ४ महिनाका बालकहरूलाई हुन्छ । यसका लक्षणहरू राम्ररी खान नसक्नु, कब्जियत हुनु, मलिलो रुवाइ हुनु, मांसपेशीको कमजोरीको कारण बच्चाहरू लल्याक लुलुक हुनु हो ।
मह बच्चाको आहाराको मुख्य भाग नभएको कारणले एक वर्ष भन्दा मुनीको बच्चालाई मह नदिनु नै राम्रो हुन्छ ।
फुड प्वाइजनिङ्गको उपचार
फुड पोइजनिङ्ग पश्चात पखाला र वान्ता गरी विषाक्त खाना बाहिर फ्याक्ने शरीरको प्राकृतिक तरिका हो । शरीरमा भएको सबै विषाक्त खाना सिधिएपछि यो रोग आफै निको हुन्छ । यद्यपी शरीरबाट बाहिरिन पुगेको पानी र नून भने खानु पर्ने हुन्छ । सबै प्रकारको फुडपोइजोनिङ्गमा स्वास्थ्यकर्मीलाई देखाउनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई देखाउन पर्ने अवस्थाहरू
१२ घण्टा भन्दा बढी पखाला लागेमा ।
१२ घण्टा भन्दा बढी बान्ता भएमा ।
दिसामा रगत देखिएमा ।
ज्वरो आएमा ।
बोटुलिजम शंका लागेमा ।
फुडपोइजोनिङ्ग रोकथाम गर्न निम्न कुराहरू गर्न सकिन्छ :
खाना पकाउनु अघि र पकाइसकेपछि साबुन पानीले कम्तिमा २० सेकेण्डसम्म हात हुने । त्यस्तै काँचो मासु, कुखुरा या माछा धोएपछि राम्ररी हात धुने ।
तातो साबुन पानीले अचानो, काट्ने भाँडा र खाना पकाउने भाँडा सबैलाई राम्ररी धुने ।
काँचो मासु , माछा अथवा कुखुरा राखेको भाँडा राम्रोसँग नपखाली पुनः प्रयोग नगर्ने ।
काँचो मासु माछा अथवा कुखुराको मासु छोएको कपडा अथवा रुमालले अरु भाँडावर्तन नपुुछने ।
फलफुल खान अघि राम्ररी धुने ।
खानालाई राम्रोसँग पकाउने ।
खाने कुरा राम्रोसँग पाकेपछि मात्र चाख्ने ।
तातो खाने कुरा तातो राख्ने र चिसो खाने कुरा चिसो राख्ने
बाँकी रहेको खाने कुरा फ्रिजमा राख्ने ।
सफा देखिए पनि खोलाको पानी सिधै नखाने
कुचिएको, खिया लागेको, फुकेको शिल तोडिसकेको बट्टाको खाना नखाने ।
खाना कतिबेर संचित गर्न सकिन्छ ?
काँचो मासु, कुखुरा, काँचो माछा किनेको एक दुई दिन भित्र प्रयोग गर्नु पर्छ ।
क्रिम, कटेज चिज, क्रिम चिज, बट्टा खोलेको एक हप्ता ।
कडा चिज २–३ महिना ।
फुल ३–४ हप्ता (चिसो ठाउँमा) ।
सागपात र तरकारी ३–५ दिन चिसो पारेर राखेमा ।
पाउरोटी केक १ हप्ता
बाँकी रहेको पकाएको मासु ३–५ दिन
बाँकी रहेको पकाएको कुखुरा टुना १–२ दिन
वटर जाम, केक ७ महिना
के सबै ढुसी आएको खाना खतरनाक हुन्छ ?
फुड पोइजनिङ्ग किटाणुको कारणले हुने भएकाले र ढुसी आफै किटाणु नभएकाले ढुसी खानाले फुड पोइजेनिङ्ग गराउँदैन । यसले कोट्रोलिजम पनि बनाउँदैन । तर कोही मानिस ढुसीसँग एलर्जिक ९ब्ििभचनष्अ० भएको खण्डमा यसले विरामी भने पार्न सक्छ । साथै ढुसीले खानाको स्वाद र वास्ना नराम्रो बनाउने भएकाले यस्तो खानाले वान्ता र वाकवाक हुन सक्छ ।
खाना राम्ररी पाकेको छ छैन कसरी थाहा पाउने ?
– रातो मासु (जस्तै खसीको) १६०ºF सम्म पकाउनु पर्छ ।
– रातो मासु ठूलो टुक्रा भए १४५ºFमा धेरैबेर पकाउनु पर्छ ।
– राँगाको मासु मासुको भित्री भाग १६०–१६५ºF नहुन्जेल पकाउनु पर्छ । माछा १३०–१४०ºF भित्री भाग सेतो नहुन्जेल पकाउनु पर्छ । बंगुरको मासु १५५ºँ मा पकाउनु पर्छ ।
– कुखुरा १७०–१८०ºFमा पानी नमरुन्जेल पकाउनु पर्छ ।
– अण्डा सेतो र पहेलो भाग कडा नहुन्जेल उमाल्नु पर्छ ।
फुड पोइजनिङ्गबाट बच्न याद गर्नपर्ने अन्य कुरा
पास्चराइजेसन नगरेका दूध कहिले पनि नपिउनु होस् ।
भान्सा घर सफा राख्नुहोस् । खाना पकाउने भाँडा, तरकारी काट्ने चुलेसी, हँसिया र खुकुरी जस्ता हतियार तथा कचौरा, थाललाई राम्ररी सफा गर्नुहोस् ।
तयारी खानालाई राम्ररी छोपेर राख्नुहोस् ।
खाना तयारी गर्नु अघी हातलाई साबुन पानीले राम्ररी सफा गर्नुहोस् । हात र हातका औंलाहरूका घाउलाई पट्टिले बाँध्नुहोस् ।
विरामीले प्रयोग गरेका भाडावर्तनलाई उमालेर सफा गर्नुहोस् ।
खानामा जिवाणु बस्न, किरा, पर्ने वा मुसा तथा अरु जनावरलाई सुध्न वा जुठाृे पार्न नदिनुहोस् । यिनीहरूले किटाणु र रोग सार्ने गर्छन् ।
खानामा धुलो पर्न वा कसैलाई छुन नदिनुहोस् ।
खाना वरपर फोहोर भाडाकुँडा र अरु बचेखुचेका खानाहरू नछोड्नुहोस्– यिनीहरूमा किटाणु आउने र त्यहाँ सन्तान वृद्धि गर्ने गर्छन् ।
सफा भाडा कुँडालाई भुँईमा नछोड्नुहोस् ।
काँचो तथा राम्ररी नपाकेको मासु नखानुहोस् । राम्रोसँग पकाएर मात्र खानुहोस् ।
बासी र गन्हाउने खाना नखानुहोस् ।
सील तोडिएका र बट्टा फुलेका क्यानका खाना नखानुहोस् । त्यसमाथि माछा त खाँदै नखानुहोस् ।
हामी केका लागि खाना खान्छौं ?
१) मुखको लागि ?
२) पेटको लागि ?
३) आँखाको लागि ?
४) नाकको लागि ?
५) अरुलाई देखाउनको लागि ?
६) अरुलाई खुशी पार्नको लागि ?
७) अरुले भन्छ भनेर ?
८) मोेटाउनको लागि कि ?
९) केवल भोक मेटाउनको लागि मात्र कि ?
१०) मनका लागि ?
११) अथवा आफ्नो स्वास्थ्यको लागि?
उपर्युक्त उत्तरहरू माथिको प्रश्नको सामान्य उत्तर हुन सक्छन् । हुनत खाने भन्ने कुरा नै सामान्यत पेट भर्नको लागि हो तर पेट भर्ने पनि माथिका विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन् । द्यथ जययप ७ अचययप
१) कहिलेकाहिँ हामी खान्छौँ केवल मुखको लागि मात्र, स्वादको लागि मात्र । त्यसको भााभअत के हुन्छ हेर्दैनौ। ँचष्भम, चयबकतभम, मचष्भम, कउष्अथ, यष्थि, तयय कधभभत, तयय mगअज अजष्ििथ ७ कय यल। यो सव स्वास्थ्यको लागि त्यति राम्रो नभएतापनि खाएसम्म यति मिठो भइरहन्छ कि खाली खाउँ खाउँ जस्तो मात्र हुन्छ । क्य, धभ कबथ तजष्क यलथि ायच तजभ mयगतज।
२) त्यस्तै कहिले काहिँ जती खाए पनि पेटै भर्दैन । खाउँ खाउँ जस्तो मात्र भइरहन्छ यो इखभच उबलअचभबतष्अ बअतष्यल भएको व्यक्तिलाई हुन सक्छ र साथै यिध कगनबच वा ी।द्य।ए लाई हुन सक्छ । सधै खाउ जस्तो तर पेट नभर्ने । त्यसैले यो हामी भबतष्लन यलथि ायच कतयmबअज भन्छौं ।
३) त्यस्तै कहिले काहिँ हामी आँखाको सन्तुष्टिका लागि पनि खाने गर्छांै । जस्तै ठूला ठूला होटेलहरूमा खाना यति राम्रो तरिकाले म्भअयचबतष्यल गरेको ल्याउँछ कि भोक नलागे पनि खाउँ खाउँ जस्तो हुन्छ । भ्थभ तझउतष्लन, भथभ अबतअजष्लन, कजयध अबकभ हरूमा, फोटोमा यति राम्रो तरिकाले म्ष्कउबिथ गरिराखेको हुन्छ कि भनेर साध्यै छैन । क्य धभ कबथ यलथि ायच तजभ भथभ।
४) त्यस्तै कहिले काहिँ यस्तो मिठो वास्ना आइरहन्छ कि भर्खरै खाएको भएता पनि त्यो सुगन्धले हामीलाई यस्तो उचभककगचभ दिन्छ कि धजथ लयत भबत बलम तचथरु
५) अरुलाई देखाउनको लागि पनि हामी कहिले काहिँ खाने गर्छौ जस्तो कि कुनै कुनै पार्टीमा या गुठि भोजहरूमा या सांस्कृतिक उत्सवहरूमा अरुले यसो गर्छ हाम्रो त्यो भन्दा पनि बढि राम्रो गर्नु पर्छ भन्ने भावनाले पनि यस्तो गर्न प्रेरणा गर्छ । ध्जभतजभच ष्त ष्क नययम यच लयत।
६) आफूलाई मन नपरेको वस्तु पनि खानु पर्ने वन्धनमा परेर अरुलाई खुशी पार्नु पर्ने समय आउँछ कहिले काहिँ । यस्तो ठूलो ठूलो म्ष्उयिmबतष्अ पार्टीहरूमा हुन सकछ ,ससुरालीमा हुन सक्छ ।
७) खाएर आइसकेपछि पनि खानु पर्ने जवरजस्ति वाध्यता पनि ‘हामी कसको लागि खान्छौँ भन्ने कुरामा आउँछ । यो पनि अरुले भन्छ भनेर भोजमा खाने कुरा फाल्यौ भन्नेमा पनि यो वाध्यता आउन सक्छ ।
८) कुनै कुनै दुव्लो व्यक्ति केवल मोटाउनको लागि मात्र दिन भर खाइरहेको हुन्छ । यसमा स्वार्थ केवल मोटाउने मात्र हो ।
९) सधै भोक लागे खाने पनि एउटा ँबअतयच हुन सक्छ । यो सामान्यत गरिबलाई हुन सक्छ । त्यस्तै रोगले पनि हुन सक्छ ।
१०) मनको लागि मात्रै खाने पनि एउटा प्रसङ्ग हुन सक्छ कसको लागि खाने भन्ने प्रश्नको उत्तरमा । जस्तै रमाइलो गर्नको लागि , मोजमस्तिका लागि, एकान्त बसेर केहि खाने विचार आएमा ःगकष्अ सुनेर मन आनन्दित भएर केहि खाने इच्छा लागेमा यो सव भावनात्मक खाने तरिकाहरू हुन सक्छन् । त्यस्तै कधष्mmष्लन उयय िबसेर म्चष्लप गर्ने, पानी परेको हेरेर खाने आदि ।
११) यो माथिका जति पनि तरिकाहरू हुन सक्छन। उत्तरहरू हुन सक्छन् के को लागि खाने भन्ने कुरामा
तर, खाने कुरा खाने भन्ने जुनसुकै भएता पनि खानु पर्छ । आफ्नो स्वास्थ्यको लागि यसमा यो चाहिन्छ, त्यो चाहिन्छ भन्ने हँुदैन । मनले देखेको जे खाए पनि हुन्छ, जहाँ खाए पनि हुन्छ र खानु पर्छ तर आफ्नो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेरेर यसमा कम खाने धेरै खाने भनेको हँुदैन । तर खानु पर्छ ठिक मात्रामा र त्यो पनि सहि सहि समयमा । दिनको तिन पटक, चार पटक खान सकिन्छ तर सामान्यतया सधै त्यहि समयमा । कुनै वन्देज अथवा पठपरेज छैन । जे पनि खान सकिन्छ । समय र ठिक मात्रामा । यो दुई ँबअतयच आवश्यक छन् । एकै समयमा खाने गर्दा खेरी हाम्रो जीउले पनि त्यति समयमा खाने इच्छा गर्छ, भनेको मतलव हाम्रो पाचन प्रणालीका एचयअभकक हरू त्यहि समयमा ब्अतष्खभ हुन्छन् । यसले गर्दा खाएको तुरुन्तै पाचन हुन्छ र हाम्रो जीउमा लाग्छ । धेरै खाएर मात्र हुने होइन, तागतिलो मात्र खाएर हुने होइन हाम्रो जीउले ब्मवगकत गर्नु सक्नु प¥यो,ब्दकयचद गर्न सक्नु प¥यो । माछा, मासु, रक्सी खानु हँुदैन भन्ने पनि छैन । सामान्यतः खानै पर्छ ष्खिभच उचयउभच ागलअतष्यलष्लन को लागि पनि । कहिलेकाँही माछा मासु खानेलाई भन्दा पनि नखानेलाई बढि ष्खिभच ७ जभबतिज उचयदझि आउन सक्छ किनकी यस्ता व्यक्तिहरूको ष्खिभच धष्िि दभअयmभ बधिबथक मगिि । प्भभउ ष्ल mष्लम ष्ल उचयउभच बmयगलत ७ चभनगबिच तष्mभ। 